Wasiir hore oo Qormo Xasaasi ah ka qoray Jahwareerka heesta Mucaaradka Dowlada Soomaaliya | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiir hore oo Qormo Xasaasi ah ka qoray Jahwareerka heesta Mucaaradka Dowlada Soomaaliya
4. maalmo kahor ka hor waxaa War saxaafadeed soo saaray 4 Xizbi oo la baxay; Wadajir, Daljir, Kulan iyo Horusocod; waxaa la is weydiin karaa maxaa kulmiyay xiligaan? Waxaa muuqata in ay isku bahaysteen dagaal ka dhan ah M. Farmaajo iyo RW Khayre lkn maxaa uga hooseeya? Maxaa kiciyey dagaalkaas? Muxuu salka ku hayaa? Aaway mucaaradkii kale? Maxaa la isku haystaa? Maxaa lagu heshiin karaa??
W/Q: Dr Mohamed Gacal